Wax ku saabsan anaga
Yaanu nahay anagu Cidda aan wax wadaagno Success Stories Media Highlights
Yaanu nahay anagu
SmartSAVER waxay ka gargaaraan qoysaska Kanadiyaanka ah bilaabista u-kaydinta waxbarashada carruurtooda macluumaadka lacagta dawladda ee bilaashka ah iyo helitaanka onlayn ahaan bilaabista kaydintaas.
SmartSAVER waa mashruuc bulsheed aan faa'iido doon ahayn. Himilidayadu waa si aan ugu sahalno qoysaska inay fahmaan oo helaan lacagta dawladda ee u taal waxbarasahada kadib dugsiga sare iyada oo la adeegsanayo Qorshaha Sajilan ee U-kaydinta Waxbarashada "Registered Education Savings Plan (RESP)".
Maxay RESP-yadu muhiim u yihiin?
RESP-yadu waa sida ugu fiican ee loogu kaydiyo waxbarashada carruurta kadib dugsiga sare waayo Dawladda Kanada ayaa kaa caawinaysa in aad ku kaydsato:
Kaydka loo yaqaan "Canada Learning Bond": Iyada oo ku xiran dakhligaaga, waxaad heli kartaa ilaa $2,000 ilmo kasta waxbarashadisa marka aad bilaabto RESP. IYO adiga oo aanay ahayn in aad wax lacag ah ku darto.
Deeqda loo yaqaan "Canada Education Savings Grant": Haddii aad ku darto lacag ilmahaaga RESP-diisa, Dawladda ayaa kuugu dari doonta in dheeraad ah si ay kaaga gargaarto kaydkaas inuu si dhakhso ah u koro.
Laba siyaabood oo SmartSAVER ayaa kuu caawin karto
Ta hore, SmartSAVER waxay siisaa qoysaska macluumaadka ay uga baahan yihiin helitaanka lacagta Dawladda ee waxbarasahada carruurtooda.
Ta labaad, adiga oo isticmaalaya codsiga bilaab RESP-gayga "Start My RESP", qoysasku waxay onlayn ku bilaabi karaan codsiga RESP iyo Kaydka loo-yaqaan "Canada Learning Bond". SmartSAVER waxay wadajir ahaan ula shaqaysaa Hay'adaha Maaliyadda (baananka) ee daafaha Kanada oo dhan kuwaas oo ka caawiya codsadayaasha helitaanka RESP oo ku bilaabmaysa $0: aan lahayn ujrad diiwaangelin, ujrad sannadle oo aan loo baahnayn in wax lagu darsado.
SmartSAVER waxay martiqaadaysaa bixiye kasta ee RESP oo u heellan gargaarista qoysaska in ay helaan Kayda loo-yaqaan "Canada Learning Bond" in ay nala shaqeeyaan. Haddii aad tahay bixiye RESP oo aad gargaari karto qoysaska uqalma inay ku furtaan $0 xisaabtaRESP (aan lahayn ujrad diiwaangelin, ujrad sannadle iyo in wax lagu darsado), fadlan nala soo xiriir.
SmartSAVER waxa kale oo ay wadajir ahaan ula shaqaysaa adeegyo bulsheed badan oo aan faa'iido-doon ahayn si loo hubiyo in qoysaska ay u adeegaan ay ogaadaan kayda loo-yaqaab Canada Learning Bond iyo sida loo helo. Haddii aad tahay urur bulsheed u adeega qoysaska laga yaabo inay uqalmaan kaydka loo-yaqaan Canada Learning Bond, nala soo xiriir maanta si aad u ogaato sida aad uga hawlgeli karto.